SOMALITALK - SUDAN
Foojignaanta Ciidamada Ammaanka ee Qaranka Suudaan oo La Kordhiyey
Dalweynaha Suudaan waxa uu ka mid yahay dalalka bariga iyo bartammaha Afrika kuwa ugu ciidan badan marka lala barbardhiga dalalka dhiggiis ah ee ay jaarka yihiin, waxaana xadduud uu la leeyahay sagaal dal, islamarkaana waa dalka Afrika ugu baaxadda iyo ballaca weyn.
Dhanka kale ciidamada nabadsugidda ee Suudaan ayaa ah kuwa si aad u foojigan, maxaayeelay waxaa jira dhibaatooyin siyaasadeed oo dalka dacalla badan kaga furan waayadan dambe, iyo dalka oo midda rubuc-qarni ah dagaal sokeeye kaga furnaa dhanka koonfureed, balse hadda u eg inuu soo afjarmaya oo xal waara loo helay dadaal dheer kaddib.
Caasimadda Suudaan ee Khartoum waa caasimadda ugu ballaaran xarumaha qaaradda Afrika balse ugu nabadgalyada badan marka loo eega caasimmadaha dhiggeed ah gaar ahaan kuwa jaarka ah.
Waxaad Khartoum ku arkeysaa qof balaayiin lacag ah bac ku sita oo jidka iska maraya cidina ay wax u dhimmeynin halka magaalada Nairobi oon mudda ku noolaa lacagta aan bannaanka lagu sarifan karin burcad iyo tuuga kala jaar ah oo jadiin doon ah awgeed.
Khartoum waxaa lagu magac aabaa caasimatu-salaam ama caasimaddii nabadda, islamarkaana ciidamada qalabka sida iyo shacabka waxaa ka dheeeya xiriir wacan oo wanaagsan, kaladambeyn, xaqdhawr iyo tixgalin baaxad leh; indhahaaguna marna kuma dhacayaan askari qof shacab ah u gafaya ama ku gaboodfalaya; halka Kenya la oran karaya ma jira wax xiriir ah oo shacabka iyo ciidamada ka dhaxeeya.
Ayadoo ay arrimahan oo dhan yihiin kuwa ay Khartoum la kali noqotay, ayaa waxaa sitimaanadan sare loo sii qaaday foojignaanta ciidamada ammaanka ee qaranka; kaddib markii asbuucii ina dhaafay afgami dhicisoobay uu dhacay, waana markii labaad ee ay laamaha ciidamada fashiliyaan iskuday noocaas ah sannadkan. Waxey ciidamada gacanta ku dhigeen hub sharcidarro ah oo la doonayay in ammaanka iyo xasillonida dalka lagu qulqulateeya waa sida hadalka loo dhigaye. Taasina waxey keentay in ay asbuucan ciidamada booliska baaritaan baaxad weyn ka billaabaan gudaha caasimadda iyo dhammaanba meelaha ay tuhmayaan iyo in lagu canaantay ilaalada xadduudaha in ay guntiga dhiisha isaga dhigaan si loo baajiya argagixisa kasta oo dhan ka ah nabadda dadka reer Suudaan.
Maalintii shalay ayey ciidamada dhawr jeer i weydiiyeen aqoonsigeyga aan dalka ku jooga waxeyna aheyd markii iigu horreysay ee aan arrinkan la kulmo sanooyinkii aan Khartoum joogay, sidaas darteed waxaan taasi ku tilmaami karaa xaaja ugub ku ah caasimadda Khartoum.